Ahoana ny fametrahana Windows 95/98 amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Ny fahaizana mametraka rafitra fiasa hafa amin'ny fitaovana tsy manohana dia nahasarika ny sain'ny mpampiasa sasany hatrany, anisan'izany ny tenako. Fony aho mbola tanora dia nifindra tamin'ny zavatra rehetra vitako foana aho ary nanandrana nanao fampifangaroana tsy azo atao amin'ny maso mitanjaka. Indraindray azoko izy ireo ary indraindray tsy azoko. Fa mazava ho azy, tamin'io fotoana io dia tonga tany Espana ny internet ary ny fahafaha-mitady vaovao izay mety hanampy ahy dia asa sarotra.
Raha sendra nandalo tao an-tsainao izany hoe afaka milalao lalao taloha amin'ny solosaina Windows 95 na 98, lalao an'ireo tsy hita intsony ary nitazomana soa aman-tsara anao nandritra ireo taona nahafinaritra, azonao atao ny manandrana mametaka kopia amin'ny birao na solosaina taloha, raha manana ianao, fa ny olan'ny kapila afaka manome mihoatra ny olana. Vahaolana iray hafa ny fametrahana emulator Windows 95/98 amin'ny iPad ary hankafizantsika ny voninahitra taloha.
Ity no nataon'i Jules Gerard, mpampiasa YouTube izay nandefa horonantsary iray asehony antsika ny dingana rehetra hahafahana mametraka Windows 95 na Windows 98 mivantana amin'ny iPad-nay hankafizanao ny lalao Fallout 2 sy Age of Empires. Ny fepetra tokana tokana dia ny fananan'ny fitaovantsika Jailbreak. Ny sisa amin'ny fizotrany dia amin'ny antsipiriany etsy ambany.
1 Antontan-taratasy ilaina:
2 fepetra takiana:
3 Mametraha Windows 85/98 amin'ny iPad
Jailbreak amin'ny fitaovana.
Kinova farany an'ny iTunes.
PC misy Windows XP na avo kokoa.
Mametraha Windows 85/98 amin'ny iPad
Misintona sy mametraka izahay iFunBox amin'ny PC-nay.
Izahay dia misintona ilay fonosana miaraka amin'ny sary Windows ary mamaha izany.
Manokatra ny fisie "c.img”Miaraka amin'ny WinImage dia ampianay ny ISO mifanentana amin'ireo lalao tianay hankafizinay amin'ny iPad anay.
Ampidirinay ao amin'ny PC ny iPad, misokatra iFunBox ary miditra amin'ny lahatahiry / User / Documents
Manala ny iPhone amin'ny PC izahay ary manokatra iFile hanome ny alalana rehetra amin'ny fisie: "c.img","dospad.cfg"Ary"w98.bat"
Avy amin'i Cydia dia manampy ny trano fitahirizam-bokin'ny http://cydia.myrepospace.com/Jujul98 / ary apetraho DOSPAD
Manokatra izahay DOSPAD, nanoratra izahay "win98”Ary kitiho ENTER
Avy eo isika dia handeha ho any Ny solosainako ary nandeha nitondra fiara C izahay, izay ahitantsika ny anaran'ireo sary ISO izay nalainay ary izany no lalao tadiavinay hitadidy ireo fotoana taloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fametrahana Windows 95/98 amin'ny iPad
Noho ireo fanavaozana ireo dia mbola tianay ianao, Telegram